Lolli Sudaan Kibbaa Keessatti Ka’e Uummata Qe’ee Isaa Irraa Baqachiise
Sudaan Kibbaa kutaa Yeii River jedhamu keessatti hokkarri uumamee siviloota kuma 8 manaa fi qe’e ofii irraa godaansisee kanneen kuma 5 ta’an gara biyya ollaa taate Ripbaablika Dimokraatawaa Kongoo tti akka dheessan godhee jira.
Walitti bu’iinsi waraana Sudaan kibbaa fi garee riphe lolaa “National Salvation Front” gidduu kan ka’e Amajjii 19 ture. Walitti bu’iinsi kun kan uumame walii galteen nageenyaa irra ga’ame kan wal waraansa biyyattii waggoota shaniif raase prezidaant Salvaa Kiir fi hoogganaa garee mormituu Riyaak Machaar gidduutti erga mallatteessamee baatii afur booda.
Dubbi himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Babar Baloch VOAf akka ibsanitti erga sanaa qabee hookkarri gab jedhee ture.
Sudaan Kibbaa keessa gareelee xixiqqoo fi garee riphee lolaa akkan hubadhetti kan Toomaas Kirillon hoogganamu NAS dhabalatee 70 oltu jira. Gareen isaas walii galtee sana akka hin mallatteessin quba qabna
Lolli sun daangaa Ripublikii Koongoo fi Ugaandaatti dhiyoo dugdee magaalaa Yei ta’uun gabaasameera.
Baloch akka jedhanitti kanneen gara Koongootti baqatan irra hedduun dubartoota, ijoollee fi maanguddoota. Kanneen kun ennaa achi ga’an dadhabanii, beelaan dararamaa fi dheebuun laaffisee kaan immoo dhukkubsatoo turan jedhan.
Kanneen keessaa namoonni dhibee busaa fi dhukkuba ka biroon dararman keessa jiru. heddun immoo balaa suukaneessaa uumame ijaan erga arganii rifatanii jiru. kana keessaa namoonni hidhatan siiviloota ennaa ajjeesan humnaan gudeedanii fi gandeen saaman ijaan arganiiru.
Baqattoonni kun gandeen baadiyyaa Koongoo konyaa Ituurii naannoo Kibuu kaabaa bakka Iboolaan dha’etti dhiyoo ga’anii jiru. Dubbi himaan jarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti dhukkubi kun naannoo kana keessa faca’uu isaaf mallattoon hin jiru. Garuu balaan mudachuu mala waan ta’eef daangaa ce’uun akkaan to’atamuu qaba jedhan.